Fampandrosoana ifotony eny amin’ny faritra Nalaina ny hevitr’ireo ben’ny tanàna
Nanomboka tamin’ny talata lasa teo ity atrikasa ity ary ho tapitra ny alakamisy 12 jolay. Ao anatin’izay no nisian’ny fampiofanana ireo mpisehatra eny amin’ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireny. Ny fikambanana iraisam-pirenen’ny tany miteny frantsay (OIF) sy ireo fikambanan’ny renivohitra sy vondrom-bahoakan’ny oseana Indiana no nikarakara ny hetsika. Nisy ny fanadihadiana sy fakan-kevitra momba ny fahitan’ireo tompon’andraikitra tahaka ny ben’ny tanàna ny fampandrosoana ifotony eny amin’ny misy azy any. Nahavelom-bolo azy ireo izany satria hatramin’izay dia zavatra efa apetraka hatrany no hita amin’ny atrikasa tahaka itony, hany ka tsy mifanaraka amin’ny zava-misy marina. Tombony amin’ity ny hevitra sy ny hetaheta eny amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mihitsy no tadiavina ny fampiharana azy. Rariny izany satria ny tompon’andraikitra eny no mahalala tsara ny resaka fotodrafitrasa maro samihafa tokony hatao mba hiteraka ny fampandrosoana ifotony. Araka izany dia tsy maintsy manana drafitra ireo ben’ny tanàna indrindra indrindra ahafahana mampandroso ny faritra iadidiany. Ankoatr’izay dia efa mamolavola ny didim-panjakana amin’ny fahafahan’ny kaominina mifandray mivantana amin’ny mpiara-miombon’antoka ny minisiteran’ny atitany. Andrasana ny fiaraha-miasa matotra hisy amin’ny fitondrana sy ny kaominina, indrindra ny fiatraikany amin’ny fiainam-bahoaka andavanandro, araka ny hetahetan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana.